Focus Times - मुटु स्वस्थ राख्ने तीन तरिका
मुटु स्वस्थ राख्ने तीन तरिका
मुटुरोग पछिल्लो समयमा घातक र भयावह बन्दैछ। मुटुरोग मुख्यतया दुई किसिमका हुन्छन्- एउटा जन्मजात हुने र अर्को वयस्कमा हुने।
यी दुई प्रकारका मुटुरोगका कारण भने फरक-फरक हुन्छन्। उमेर बढेसँगै हुने मुटु रोगका पनि कारण बेग्लै हुन्छ।
आज हामी वयस्कमा र बढ्दो उमेरसँगै हुने मुटुरोगबारे कुरा गर्दैछौं।
यो मुख्यतया जे पायो त्यही र बढी खानपिन गर्ने तर शारीरिक व्यायाममा ध्यान नदिने समस्याले गर्दा हुन्छ।
सबभन्दा पहिलो त खानपानमा ध्यान दिनु नै हो। मटुरोग सम्भावना भएकाहरूले खाने स्वस्थ खानपानलाई हामी चिकित्सा भाषामा 'मेडिटेरियन डाइट' भन्छौं। यो भनेको चिल्लो कम भएको खाना हो। घ्यू, चिज, पनिर, बटर लगायत तेलजन्य कुराहरू थोरै प्रयोग गर्नुपर्छ।
त्यस्तै रातो मासु नखाने र खसी-राँगाको मासु सकेसम्म खानुहुँदैन। कुखुराको मासु भने खाए हुन्छ। तर बोसो भएको खानेकुराबाट टाढै बस्नुपर्छ।माछामा पाइने बोसोले भने मुटुलाई फाइदा गर्ने मानिन्छ। खसी, राँगाको साटो माछा खानु मुटुका लागि स्वस्थकर हुन्छ।
भात, तेलमा पकाइएका आलु लगायतका कार्बोहाइड्रेट भएका खाना कम खानुपर्छ। हरियो सागसब्जी र फलफूल धेरै खाए जोखिम कम गर्न सकिन्छ। कुन खाना कत्तिको उपयुक्त छ भनेर चिकित्सक वा खाद्यविज्ञहरूसँग सल्लाह लिन पनि सकिन्छ।
दोश्रो उपाय भनेको नियमित शारीरिक व्यायाम हो। यसलाई स्वस्थ जीवनशैली भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। हामीले खाएका खानेकुराहरूलाई शरीरले भरपुर उपयोग गरोस् र अनावश्यक जम्मा नगरोस् भन्नका लागि पनि व्यायाम जरूरी हुन्छ। त्यस्तै व्यायामले मुटुलाई सक्रिय र चलायमान राख्न पनि मद्दत गर्छ।
धेरैको प्रश्न हुन्छ, नियमित व्यायाम कति गर्ने? कसरी गर्ने? जहिले पनि जिम नै जानपर्छ? एकदमै धेरै काम गर्नुपर्छ?
मुटु स्वस्थ राख्न हिँडे मात्रै पुग्छ। तर कम्तीमा ३० देखि ४० मिनेटसम्म फटाफट हिँड्नुपर्छ। फटाफट भनेको कति हो भन्नुहोला, यो भनेको हिँडिरहेका बेला आफू नजिकको मान्छेसँग कुरा गर्न गाह्रो हुने गरीको हिँडाइ हो। तपाईं हिँड्दै गर्दा बोल्न स्वाँस्वाँ भयो, भने तपाईंको शरीरले धान्ने गरीको फटाफट हिँडाइ भयो।
तर नियमित गर्दै जाँदा हिँडाइको चाल जति बढाउन सक्नुभयो, शरीरका लागि उति वेश। यति गरेपछि मुटुको व्यायाम हुन्छ, पर्याप्त हुन्छ।
तेश्रो तरिका भनेको मुटुरोग लाग्ने सम्भावनाहरू पत्ता लगाउनु हो। यसका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ। हामीहरू कुनै जटिल समस्या नआउन्जेल जँचाउन गइहाल्दैनौं। यसले गर्दा मुटु रोगका सम्भावनाहरू चाँडै पत्ता लाग्दैन।
मुटुरोग लाग्ने मुख्य कारक तत्वमा धेरै कुरा हुनाले जाँच आवश्यक हुन्छ। ढल्किँदो उमेर, कामको चाप, तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत समस्या भएकाले झन् धेरै सजग हुनुपर्छ। चिकित्सकको सल्लाहअनुसार आवश्यक समयमा परीक्षण गराइहाल्नुपर्छ।
'केही त भएको छैन' भनेर बस्नुहुँदैन। समस्या नहुनेले पनि कम्तीमा वर्षमा एकपटक त जँचाउनै पर्छ। यसरी जचाउँदा रोगका कतिपय कारकहरु नियन्त्रण गर्न सकिन्छन्। स्वास्थ्यमा देखिएका अरू समस्याबारे पनि नियमित जाँच हुन्छ। यी समस्यामा तलमाथि भएमा औषधी खाएर वा जीवनशैलीमा मात्रै हेरफेर गर्दा पनि मुटुरोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ।
मुटुरोगबाट बच्ने यही नै अचुक उपाय भन्ने हुँदैन। जोकोहीलाई जहिले पनि हुनसक्छ। माथि भनिएका तीन तरिका अपनायौं भने धेरै हदसम्म जोखिम भने कम गर्न सकिन्छ।
Be smoke-free. Being smoke free is one of the best things you can do to protect your heart. ...
Manage your blood cholesterol. ...
Manage diabetes. ...
Be physically active. ...
Enjoyavariety of nutritious foods. ...